Sawir: Keydso, Maaree, oo Abaabul Muuqaalka iyo Muuqaalka Warbaahinta ee hodanka ah ee Agile DAM | Martech Zone
Khamiis, Maarso 18, 2021 Khamiis, Maarso 18, 2021 Douglas Karr
Maareynta Hantida DIgital (Dam) barnaamijyadu waxay socdeen in ka badan toban sano, iyaga oo u suurta gelinaya shirkadaha waaweyn inay keydiyaan, maareeyaan, abaabulaan, oo u qaybiyaan faylalka warbaahineed ee hodanka ku ah sumcadda la oggolaaday. Waa kuwan fiidiyow weyn oo sharraxaad ka bixinaya sida ay `` Imagen '' uga caawiso sumadaha inay si fiican u liqaan oo ay u maareeyaan hantidooda:
Imagen waxay bixisaa laba shey oo DAM ah:
Bal qiyaas Go
Madal maaraynta hantida dijitaalka ah ee agile si loo kaydiyo loona abaabulo dhammaan fiidiyowgaaga iyo waxyaabaha ku jira warbaahinta hodanka ah. Ka fog marin looga heli karo qalab kasta oo ku xiran si aad u calaamadeyso, u wadaagto, u sharraxdid, iyo inbadan.
Waxyaabaha 'Imagen Go' waxaa ka mid ah:
kaydinta - jiido oo hoos u dhig faylka ama faylalka faylalka laga soo rido qalab kasta oo isku xidhan oo aad ku calaamadin karto, ku sharxi karto, iyo in ka badan.
Search - baaritaan deg deg ah oo sax ah oo ka caawiya kooxahaaga hal abuurka ah ama macaamiishaada inay si fudud ku helaan hantida ay raadinayaan.
Tagging otomaatiga ah - waqti yar ku qaad tagging AI taas oo ka dhigaysa waxa aad ka kooban tahay mid sahlan in laga helo raadinta ereyada fudud.
iskaashi - Ku martiqaad kooxaha in ay iskaashadaan, dib u eegaan, ogeysiiyaan, oo ay ansixiyaan waxa ku jira. Xitaa waad calaamadeyn kartaa aagag gaar ah fiidiyowyada iyo sawirrada.
Yaree culeyska maareynta feylka, dib u isticmaal hantida si hufan, si deg deg ah u gaarsiiya ololeyaasha, hubina joogteynta sumadda.
Bal qiyaas Tijaabada Bilaashka ah
Waxay diiradda saareysaa shirkadaha isboortiga iyo warbaahinta, Imagen Pro waa madal maareyn fiidiyoow caqli-gal ah oo kaa caawineysa inaad abaabusho waxyaabahaaga adag, oo si adag kuu xakameynaya. Kaydi, hel, arag, u qaybi oo u maaree mawduucaaga si fudud, oo fur qiimaha, laga bilaabo magacaaga illaa khadkaaga hoose.
Muuji Noocyada Pro-ka ah:
Dukaan - Fiidiyowga, sawirrada, maqalka, dukumiintiyada, iyo qoraalada warbaahinta bulshada oo si ammaan ah loo xafiday, si fudud ayaa loo helay.
Raadi - Kusoo gal kaydkaaga warbaahinta oo dhan si fudud. Cunitaanka dareenka leh iyo qalabka maareynta waxay la micno tahay in faylalkaaga la abaabulay, la tixraacay, oo uu diyaar u yahay inuu ciyaaro.
View - Imagen Pro wuxuu si habsami leh ugu habboon yahay meheraddaada. Ku hagaaji khibrada isticmaale ee dhagaystayaashaada gaarka ah. Habee barxadda, soosaar dakhli, oo hagaaji soo celinta maalgashiga guud ahaan dukumiintigaaga.
Maamul - Ku fur awooddaada fiidiyowga aaladaha maareynta caqliga ah ee kuu oggolaanaya inaad xakameyso, abaabusho, wadaagto, falanqeyso oo aad wax ka qabato keydkaaga.
Qaybinta - Haddii aad daawaneysid dalab, toos u socosho, ama aad gudbineyso feylasha diyaarka ah, Imagen Pro wuxuu ku xirayaa dhagaystayaashaada waxyaabaha ay u baahan yihiin - xawaaraha ugu dhakhsaha badan.
Imagen sidoo kale waxay bixisaa muuqaal-hodan ah API si ay si buuxda ugu dhexgalaan wax soo saarkooda meheraddaada ganacsi.
Tags: biyo xireenaiiswada sumadayntabaabuurototaggingxidheenkamaaraynta hantida dijitaalka ahimagenimagen tagsawiro promaaraynta hantida hodanka ahwarbaahinta isboortigamaaraynta hantida fiidiyowga